ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲကျင်းပ | Information Committee
ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲကို ယနေ့မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲက ရန်ကုန်မြို့ Park Royal Hotel ၌ ကျင်းပသည်။
အဆိုပါ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲသို့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချ ထားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး၊ ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေးကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက် များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီဝင်များနှင့် အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့ဝင် များ၊ အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ် ရုံးနှင့် အာဆီယံ လူသားချင်းစာနာမှု ညှိနှိုင်းရေးမှူးရုံး (AHA Centre) တို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ ၊ ဖိတ်ကြားထားသော နိုင်ငံတကာ သံတမန်များ၊ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ပြည်တွင်း ပြည်ပ သတင်းမီဒီယာ အဖွဲ့အစည်း များမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ရှေးဦးစွာ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာ ချထားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးက ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ အလျင်အမြန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာစေရေးအတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပဏာမရှင်းလင်း ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် ရေး ကော်မတီ၏ အကြံပေး ဘုတ်အဖွဲ့ဝင် Rt. Hon. Lord Darzi of Denham က ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ယခုထက်တိုင်အောင် စိန်ခေါ်မှုများစွာကို မိမိတို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ နေကြရဆဲ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရခိုင်ဒေသနှင့်ပတ်သက်၍ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်း၊ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်းတို့မှာ အဓိက အကျဆုံး အကျပ်အတည်းများ အဖြစ် အသိအမှတ်ပြု သတ်မှတ်ထားပါကြောင်း၊ ကိုဖီအာနန် အစီရင်ခံစာပါ အကြံပြုချက်များကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင် အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တိုးတက်မှုများစွာ ရှိခဲ့သလို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားရမည့် လုပ်ငန်းများစွာကိုလည်း မနားမနေ အကောင်အထည်ဖော်ကြရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဒုက္ခသည်များ ဘေးကင်းလုံခြုံစွာဌာနေ ပြန်နိုင်ရေး၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ပြဿနာကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းနိုင် စေရေးတို့အတွက် ဆွေးနွေး ဖြေရှင်းမှုများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆက်လက်ပြုလုပ်သွားရန် အရေးကြီးပါကြောင်း၊ မြန်မာ နိုင်ငံအတွင်း စေ့စပ်ဆွေးနွေး ဖြေရှင်းခြင်း ပြုလုပ်ရမည့်အပြင် မြန်မာနှင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ အကြားတွင်လည်း အပြန်အလှန် စေ့စပ်ဆွေးနွေးဖြေရှင်းခြင်းကို လုပ်ဆောင်သွားရမည် ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးနှင့် အာဆီယံလူသားချင်း စာနာမှု ညှိနှိုင်းရေးမှူးရုံး (AHA Centre) မှ Deputy Executive Director, Mr.Arnelcapili ကယခုပြုလုပ်ခဲ့သော အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲတွင် လွတ်လွတ်လပ်လပ်နှင့် ပွင့်ပွင့် လင်းလင်းဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ကာ သုံးသပ်လေ့လာမှုများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ပါဝင် ဆွေးနွေးသူ များမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံပြုချက်များအတိုင်း ဆက်လက်၍ အားတက်သရော ဆောင်ရွက်သွားကြမည် ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ကတိကဝတ်ပြုမှုများ ရှိပါကြောင်း။
အာဆီယံ အသင်းကြီးသည် အာဆီယံအရေးပေါ် တုံ့ပြန်မှုနှင့် အကဲဖြတ်လေ့လာရေးအဖွဲ့ (ASEAN-Emergency Response and Assessment team) မှတစ်ဆင့် ရခိုင်ဒေသနှင့် ပတ်သက်၍ အကဲဖြတ်လေ့လာမှု ပြုလုပ်နိုင်ရေးအတွက် ပဏာမလိုအပ်ချက်များအတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့သည် စစ်တွေ၊ မောင်တောနှင့် နေပြည်တော် တို့သို့ သွားရောက်၍ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းမှုများနှင့် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ အကဲဖြတ်လေ့လာမှု အစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံကို လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချထား ရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်သွင်းနိုင်တော့ မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဒုက္ခသည်များ နေရပ်သို့ ချောမွေ့စွာနှင့် စနစ်တကျ ပြန်နိုင်စေ ရေးတို့အတွက် မြန်မာအစိုးရ အဖွဲ့က အားကြိုးမာန်တက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေသည်ကိုလည်း မိမိတို့အသိ အမှတ်ပြုပါကြောင်း၊ ဒုက္ခသည်များ ဌာနေပြန်နိုင် ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အာဆီယံအတွင်း ရေးမှူးချုပ်နှင့်တကွ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများက စုပေါင်းကြိုးပမ်းမှုအဖြစ် လက်တွဲလုပ်ကိုင် လျက်ရှိကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအား ဆက်လက်၍ အကူအညီများပေး သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြား သည်။
ထို့နောက် တက်ရောက်လာကြသည့် ပြည်တွင်းပြည်ပမီဒီယာများ သိရှိလိုသည့် မေးခွန်းများကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး၊ အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့ဝင် Rt. Hon. Lord Darzi of Denham နှင့် (AHA Centre) မှ Deputy Executive Director, Mr. Arnelcapili တို့က ကဏ္ဍ အလိုက် ရှင်းလင်းဖြေကြားကြသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော တိုက်ပွဲများနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်ဖက်နိုင်ငံ၌ ရောက်ရှိနေ သော နေရပ်စွန့်ခွာသူများကို ပြန်လည်လက်ခံမည့် အစီအစဉ် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှု ဖြစ်စေ သလားဆိုသည့် မေးခွန်းကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဝင်းမြတ်အေးက ''ရခိုင်မှာရှိနေတဲ့ နေရပ်စွန့်ခွာသူတွေ စတင်ထွက်ခွာ ကတည်းက အစိုးရအနေနဲ့ ပြန်လည်လက်ခံမယ် ဆိုတာ ယတိပြတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးသား ဖြစ်တယ်။ နှစ်နိုင်ငံညှိနှိုင်းပြီး သဘောတူညီချက် စာချုပ်တွေ ချုပ်ဆိုတယ်။ ပြန်လည် လက်ခံရေး အစီအစဉ် အသေးစိတ်ရေးဆွဲ လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အစီအစဉ်အတိုင်း ကြိုးစား ဆောင်ရွက် နေတယ်။ သဘောတူညီချက်အတိုင်း နှစ်နိုင်ငံညှိနှိုင်းမှုတွေကို ယခုထက်တိုင် အောင်မြင်အောင် ကြိုးစားဆောင်ရွက်လျက် ရှိတယ်။ မကြာခင်က နှစ်နိုင်ငံညှိနှိုင်းမှု အစည်းအဝေး တစ်ခုကို ဆောင်ရွက်ပြီး ပြန်လည်လက်ခံရေး အစီအစဉ်ကို ညှိနှိုင်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဒေသမှာ ယခုလို အခြေအနေတွေ ပြောင်းလဲနေ ပေမယ့် ပြောင်းလဲတဲ့ အခြေအနေ ပေါ်မူတည်ပြီး လက်ခံရေး အစီအစဉ်အောင်မြင် အောင် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်" ဟု ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ အရေးကိစ္စကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါ မြန်မာအစိုးရက ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ မြန်မာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေက ခေါင်းဆောင်များ၊ ရခိုင်မှာရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်များ၊ ပြည်ပရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအရေး၊ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ခေါင်းဆောင် များနဲ့စုပြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမယ့် အစီအစဉ် လုပ်ဆောင်ရန် ရှိ/မရှိ မေးခွန်းကို ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဝင်းမြတ်အေးက ''ရခိုင်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ရင် နေရပ်စွန့်ခွာသူတွေ ပြန်လည်ရောက်ရှိရေးနဲ့ နိုင်ငံအတွင်းမှာ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေ အထူးသဖြင့် ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာ ရောက်ရှိနေ တဲ့သူတွေရဲ့ အရေးကို အမြဲတမ်း ထည့်သွင်း စဉ်းစားပါတယ်။ ဒီလိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ ပြန်လည်လက်ခံရေး၊ နေရာချ ထားရေးကို အောင်မြင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ အစဉ်တစိုက် ကြိုးစားနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပြန်လည် လက်ခံရေး၊ ပြန်လည် နေရာချထားရေးနဲ့ ကျန်ခဲ့တဲ့သူတွေအတွက် သူတို့ရဲ့ စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေဖို့နဲ့ သူတို့ဒေသမှာ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ အဓိက ဆောင်ရွက်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
'' ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရင်းတွေကို ပြန်ကြည့်လိုက်ရင် လူမှုစီးပွားဘ၀ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နောက်ကျခဲ့တာ အဓိက အကြောင်းအရင်း တစ်ရပ်အနေနဲ့ ဖြစ်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အဲဒီဒေသမှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေ အများကြီး ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ဘာပဲ ဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက် ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကို ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ ဘယ်တော့မှ အစိုးရ တစ်ရပ်တည်းနဲ့ ဆောင်ရွက်တာ မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း ကော်မတီ၊ ကော်မရှင်တွေဖွဲ့ပြီး သူတို့တွေဆီက အကြံယူတယ်။ ကော်မတီတွေဖွဲ့ပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို လုပ်ဆောင်တာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို ဆောင်ရွက်တဲ့အခါ ဒီကော်မတီမှာ တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေက နေပြည်တော်မှာ ထိုင်ပြီး ဒါတွေကို ဆောင်ရွက်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။
''ကျွန်တော်တို့ဆိုရင် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်တဲ့ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ ရခိုင်ကို စဖြစ်ကတည်းကနေ အခုထက်ထိဆိုရင် ၄၆ ခေါက်ရှိပါပြီ။ ၄၆ ခေါက်သွားတဲ့အထဲမှာ သက်ဆိုင်ရာ လူမှု အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တွေ၊ အုပ်ချုပ်တဲ့အုပ်ချုပ်သူ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ဆွေးနွေး တာတွေရှိတယ်။ ဒီလိုဆွေးနွေးတာ ၁၇ ကြိမ်ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေ အကောင်အထည်ဖော် တာတွေကို ပြည်သူသို့ အစီရင်ခံစာဆိုပြီး ၄ ကြိမ် ထုတ်ပြန်ခဲ့တာ ရှိပါတယ်။ သေသေချာချာ ဖတ်ကြည့်ရင် တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အကြံပေးတာကောင်းပါတယ်။ ဒီထက် ပိုမိုပြီး ထိရောက် အောင် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ဒါကနိုင်ငံတွင်းမှာ လုပ်နေတဲ့ကိစ္စပါ။ နိုင်ငံတကာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော့ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်း ဆောင်ရွက်နေတာတွေ ရှိပါတယ်။ UEHRD မှာလည်း လုပ်နိုင် ကိုင်နိုင်တဲ့သူတွေ စုစည်းပြီး နိုင်ငံတကာကိုသွားပြီး သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ အစည်းအဝေးတွေ၊ သတင်းအချက်အလက် မျှဝေတာ တွေလုပ်တယ်။ အကြံဉာဏ်ယူတာတွေ လည်း ဆောင်ရွက်နေပါတယ်'' ဟု ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
နောက်နှစ်တွင် ဒုက္ခသည်များ ပြန်လာရေးအတွက် သက်တမ်းတစ်နှစ် ထပ်တိုးမှုကို သိရတဲ့အတွက် ယခုလက်ရှိ် ဆက်ပြီးလက်ခံရင် လက်ခံရေးစခန်းတွေက နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင် ရရှိဖို့ ဘယ်လို အစီအစဉ် ရှိပါသလဲ မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဝင်းမြတ်အေးက ''နယ်စပ် ခြံစည်းရိုးကို ကုန်းပိုင်းရော၊ ရေပိုင်းပါ လုံခြုံအောင် ကြိုးစားနေ ပါတယ်။ သို့သော်လည်း အဝင်အထွက်တွေ ရှိနေပါတယ်။ အစိုးရသစ် တက်ကတည်းက ခြံစည်းရိုးလုံခြုံအောင် ဆောင်ရွက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အောင်မြင် သော်လည်း လိုအပ်နေပါ သေးတယ်။
''ယခင်ကလည်း ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှု ကိစ္စရပ်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုလည်း ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှုမှာ ထွက်သွားတဲ့ လူတွေရှိတဲ့အတွက် ပြန်လည်လက်ခံဖို့ သဘောတူညီချက်အစီအစဉ် လုပ်ဆောင် ထား တာရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ ပြန်ဝင်လာတဲ့သူတွေ အကုန်လုံးကို ဘယ်သူ့ကိုမှယုံတယ်၊ မယုံဘူး မဟုတ်ဘူး၊ တကယ့်ကို ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာနဲ့ ပြန်လည် ဝင်နိုင်ဖို့အတွက် စိစစ်ဆန်းစစ်တဲ့ ကိစ္စတွေ၊ အဆင့်ဆင့် လုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ လက်ထဲမှာ အထောက်အထားမရှိတဲ့ လူကတော့ ပြန်ပြီးတော့ စိစစ်ရမှာမို့လို့ ဒီလမ်းကြောင်းထဲကို ဝင်ရမယ်။ ဒီလမ်းကြောင်းထဲကို ဝင်ခြင်းသည် နိုင်ငံသား ဖြစ်မှုအတွက် အစလမ်းစဉ်ဖြစ်ပြီး အင်မတန်ကို အကျိုးရှိတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ တကယ့်ကို ညီညွတ်တဲ့ လူကို နိုင်ငံသားပေးချင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်မို့ တကယ်ကို စိစစ်ပြီးတော့ တကယ်ရသွားနိုင်တဲ့ သူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
'' ဒီအစီအစဉ်ကို ဆောင်ရွက်ရင် ဘယ်လောက်ကြာမှာလဲ ဆိုတာကို မေးရင်တော့ တကယ့် ဖြစ်စဉ်က လေးလခွဲပဲကြာတယ်။ သို့သော်ဒီဖြစ်စဉ်က မှတ်ပုံတင်ကိုစပြီး ဖွင့်ပေးလိုက်တာနဲ့၊ စိစစ်တဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနက ခွင့်ပြုတာနဲ့ လေးလခွဲအတွင်း မပြတ်သွားဘူး ဆိုတာရ ှိတယ်။ ဘာ့ကြောင့် မပြတ်လဲဆိုတော့ အချက်အလက်မစုံရင် တစ်ခါ ပြန်ခေါ်ရ တာရှိတယ်။ ပြန်မေးရတယ်။ ပြန်ချိန်းရတယ်။ ဒါကိုစိစစ်ပြီး ပြန်လည်ထုတ်ပေးခါနီးကျရင် ပြန်ခေါ်ရသေး တယ်။ အဲဒီအခါ ကျရင် စိစစ်တဲ့ကတ်တွေ ကျွန်တော်တို့မှာရှိပြီးမှ ပြန်ခေါ်တဲ့အခါမှာ မလာတာ တွေလည်း အများကြီးရှိတယ်။ ဒီကာလကတော့ လေးလခွဲကနေ ခြောက်လအထိ ကြာနိုင်တယ်။ တကယ်တမ်း ဆောင်ရွက်သူတွေ တကယ်လိုချင်လို့ လုပ်တဲ့ လူအပေါ်မှာ မူတည်တယ်။
သူအားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးစားရင် ဒီဘက်အစိုးရကလည်း သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကို အားပေး နေတယ်။ ပံ့ပိုးနေတယ်။ ကူညီနေတယ်။ တိုက်တွန်းနေတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အဆင်ပြေမှာ ဖြစ်ပါတယ်'' ဟု ပြောသည်။
၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥပဒေကို ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ မေးခွန်းကို ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဝင်းမြတ်အေးက ''အကြံပြုချက် ၈၈ ခုရှိတဲ့အထဲက အရေးပါတဲ့ဥပဒေ တစ်ခုပါ။ ဥပဒေ ပြင်မယ်ဆိုတာ မလွယ်ကူဘူး။ ဥပဒေကြမ်းကို အရင်ပြုစုရတယ်။ သုံးသပ်ရ တယ်။ လွှတ်တော်မှာ တင်ရတယ်။ ဆွေးနွေးရတယ်။ ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကြံပြုထားတဲ့အတွက် စဉ်းစားရတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြည်သူအားလုံးကို အကျိုးရှိစေတဲ့ အကြံပြု ချက်တွေကို စတင်ဖို့ အကောင်အထည်ဖော်နေပါတယ်'' ဟု ပြောသည်။
ဆက်လက်၍ အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့ဝင် Rt. Hon. Lord Darzi of Denham က ဥပဒေပြောင်းလဲဖို့ ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာမှ မဟုတ်ပါဘူး။ လွတ်လပ်တဲ့ ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆို အချိန်ယူရပါတယ်။ ခက်တာက ကျွန်တော်တို့မှာ အချိန်မရှိပါဘူး။ ဥပဒေဆိုတာ ပြင်မှမဟုတ်ပါဘူး။ အဓိပ္ပာယ် ကောက်ယူပုံ ပြင်ဆင်တာရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးတာဟာ အခုလို ဆောင်ရွက်မယ် ဆိုပြီးတော့ ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆိုတဲ့ လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းက မသင့်ဘူးလို့ပြောကြားချင်ပါ တယ်''ဟု ပြောကြားသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ထားရှိသည့် အခြေအနေကို သိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးက '' မြန်မာနိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေး နဲ့ပတ်သက်လာရင် အင်မတန်လေးစားတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ရင် လိုအပ်ရင် ကုလသမဂ္ဂနဲ့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် တာတွေရှိတယ်။ အရွယ်မရွေး ကလေးငယ်ကနေ သက်ကြီးရွယ်အိုအထိ လူ့အခွင့်အရေးတွေ အားလုံးကို ဖော်ဆောင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စ တွေမှာလည်း လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမြဲတမ်းအလေးထားပြီး ဆောင်ရွက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်'' ဟု ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့သည်။